”Farmaajoow saaxiibkeyow markale i maqal!” – Nin ay Farmaajo aad iskugu dhowaayeen oo dardaaran soo diray | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Farmaajoow saaxiibkeyow markale i maqal!” – Nin ay Farmaajo aad iskugu dhowaayeen...
”Farmaajoow saaxiibkeyow markale i maqal!” – Nin ay Farmaajo aad iskugu dhowaayeen oo dardaaran soo diray
(Hadalsame) 06 Sebt 2021 – Madaxweyne Farmaajo: Saaxiibkeyow mar kale i maqal!!”.
Nin mar Ra’iisal wasaare kasoo noqday Soomaaliya, intii bur burka lagu jirey ayaa waxaa mar dhacday in maalin maalmaha ka mid ah magaalada Muqdisho, uu qarax ka dhacay iyadoo dad ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen.
Kooxda al shabaab oo marar kala duwan qaraxyada ceynkaas ah gaystay ayaa sheegatay in ay iyagu ka dambeeyeen.
Nin aan aad ugu kalsoonahay oo ka mid ahaa ragga ugu dhawaa Ra’iisal wasaarahaas oo magaca ilaahay iigu dhaartay ayaa ii sheegay in ninkii Ra’iisal wasaaraha ahaa uu talo ahaan ugu soo jeediyey inuu wax ka qabto amaanka dalka oo faraha kasii baxaya.
Waxaa dhacday ayuu yiri in Ra’iisal wasaarihii intuu cabaar aamusay ayuu iigu jawaabay. adigu waxaad ka hadlaysaa amaanka wax ka qabo, laakiin anigu walaahi hadii Soomaaliya oo dhan ay gubato oo dab qabsado kalama jecli, kursigeyga ayaana waxa walba iiga muhiimsan.
Haddaba marka loo fiirsado hab dhaqanka masuulkaas iyo sida uu fekarayey waxaa halkaa ka cad xigmad xumidiisa,naxariis daradiisa iyo maan gaabnida ninkaas Ra’iisal wasaaraha soo noqday.
Ninkaasi Soomaaliya, oo dhan waxuu ka doortay oo kala qiimo badnaadey kursigiisa inuu ilaashado waxii dhimanaya,waxii dhaawacmaya iyo dalka oo dhan gubashadiisa waa nin aan kala jeclayn.
Aan u imaado saaxiibkey Madaxweyne Farmaajo iyo qoraalkan oo ah fariintii labaad ee aan u dirayo.
Mudane Madaxweyne waxaad ogtahay in saacadihii la soo dhaafay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya ay aad u kacsantahay, waxaana xaalada uga sii daray saaxiibkeyow sida dad badan ay qabaan talaabadii ugu dambaysay ee aad qaaday iyo wareegtada aad soo saartey taas oo anigu aragtideyda iigu muuqata in ay tahay dabaaqtan, iyo is hortaagid in cadaalada la oogo.
Waxaa muuqata inaad keliya ka eegtay arinta taagan in saaxiibkaaga oo ah agaasimaha (Nisa) Fahad Yaasiin, aad ku difaacdo iyadoo shaqo joojin uu ku sameeyey Ra’iisal wasaare Rooble, ninkaas oo lagu tuhmayo in ay gacantiisa ku maqan tahay gabadha Soomaaliyeed ee Ikraan Tahliil Faarax, oo weli nolol iyo geeri midna lagu hayn mudo laba bilood ka badan iyadoo ka mid aheyd shaqaalaha uu madaxda u ahaa.
Saaxiibkeyow hadaad ogtahay iyo hadii kaleba Shacbiga Soomaaliyeed oo dhan ayaa ka gil gishay dulmiga ku dhacay gabadhaas, waxaana ay codsadeen in cadaalad ay hesho. baaqaas isagoo ka jawaabaya ayuu talaabo u qaadey Ra’iisal wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Haddaba mudane madaxweyne Maxamed Cabdulahi Farmaajo, saaxiibkeyga qaaliga ahow, intaad cadaalada u hiilin laheyd oo dulmiga diidi laheyd, Ikraan Tahliil, xaqeeda usoo dhicin laheyd oo codka shacbiga Soomaaliyeed, dhageysan laheyd ma waxaad ka dooratay oo ka jeclaatay Fahad Yaasiin, oo hal shaqsi ah iyo weliba inaad ku garab siiso dulmi lagu tuhmayo inuu gaystay.
Waxaan kaa rajeynayaa saaxiib xikmad xumidaas iyo taladaas guracan kusii dheganaan oo caqligu uu shaqeeyo, hana u fekerin sida ninka aan kasoo hadlay ee dadka iyo dalka ka doortay kursiga.
Fadlan tix geli xanuunka ay dareemayso hooyo Qaali Maxamud Guhaad, oo gabadheedu ka maqan tahay cadaaladana garab istaag.
Mudane aan mar kale ku xasuusiyee Bishii April 29-kedii sannadkan 2021-ka ayaan qoraal aan horey kugu soo qoray oo barteydan Facebook, ku baahiyey waxaan kugula taliyey inaad ka digtoonaato kuwa kuu nacamleeya ee aan isku dayin in ay aragti kugu biiriyaan, aana ku dhiirran karin in ay ku qabtaan marka aad qaldan tahay. Kuwaas markii aad kursiga ka tagto ayay kugu been abuuran doonaan, oo waxay dhihi doonaan: Anigu arrintaas waan kala taliyay, balse wuu iga diiday.
Mar kale waa isla kuwaa ragga aan kaaga digayey oo hada kugula talinayo shacbiga Soomaaliyeed oo dhan iska tuur oo warkooda ha maqlin ee saaxibkaa Fahad Yaasiin dulmi ku garab sii.
Saaxiibkeyow waxaa ii muuqda weli inaad dabada hayso talo xumadii aan dhawr jeer oo hore kaaga digay.
Mudane Madaxweyne waad ogtahay weligay marna kaalama hadlin dan ii gaar ah. Ee saaxiibkey Farmaajow horey waxaan kuu iri mar i maqal, maantana waxaan ku leeyahay mar kale i maqal oo damacaada iyo talo xun oo lagu siiyo darteed ha u burburin dalkaada hooyo.
Ugu dambayn saaxiib waxaan ku kalsoonahay in farriintaan ku soo gaari doonto, waxaan mar kasta adiga iyo Soomaaliyaba idiin rajaynayaa mustaqbal ifaya.
Fiiro Gaar ah: Sawirka hoose waa Madaxweyne Farmaajo, Aniga iyo Amiin Caamir, waa habeen xusuus gaar ah ii leh.
Shir aan kaga qeyb galnay dalka Mareykanka, ka dib markii uu dhamaadey ayaa Hotel aan wada deganayn waxaa dhacday in 11 habeenimo ilaa 5 aroornimo sheeko ku gaarnay, waxaana na wehlinayey Maxamud Makis, oo sawirka qaadey kana mid ahaan jirey qorayaashii wargeyskii xidigta Oktobar.
Previous article”Somalia waxaan xiriir la lahayn muddo 600 oo sano ah kahor waxayna ku jiraan dalalka nagu daray QM!” – Danjiraha cusub ee Shiinaha
Next articleIimaan la’aantii keentay inuu IHAANO ku dambeeyo Alpha Conde (Muxuu sameeyey?)